Bit By Bit - Mass mmekota - 5.5.5 Nwee usoro ziri ezi
The ndụmọdụ na-usoro ziri ezi na-emetụta niile nnyocha kọwara n'akwụkwọ a. Na mgbakwunye na ihe n'ozuzu mbipụta nke ụkpụrụ omume-atụle n'Isi nke 6-uka mmekota oru ngo bulie ụfọdụ kpọmkwem usoro ziri ezi okwu, na ebe ọ bụ na uka mmekota bụ ya mere ọhụrụ na-elekọta mmadụ research, nsogbu ndị a nwere ike ịbụ n'ụzọ zuru ezu o di na mbu.
Na ihe niile uka mmekota oru ngo, mbipụta nke akwụ ụgwọ na kaadị bụ mgbagwoju. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ ndị si ewere ya unethical na ọtụtụ puku ndị mmadụ na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ na Netflix Nrite n'ikpeazụ enwetagh ụgwọ. Relatedly, ụfọdụ ndị si ewere ya unethical-akwụ ndị ọrụ na Micro-ọrụ na ọrụ ahịa nnọọ obere ego ka. A ikpeazụ nke nke akwụmụgwọ bụ chepụtara akwụkwọ. Dị iche iche oru ngo na-dị iche iche na-eru nso, ma ụfọdụ oru ngo-enye chepụtara n'aka òtù nile nke uka mmekota; Dị ka ihe atụ, ndị ikpeazụ ede akwụkwọ nke mbụ Foldit akwụkwọ bụ "Foldit Player" (Cooper et al. 2010) .
Open oku na ekesa data collection nwekwara ike welie mgbagwoju ajụjụ banyere nkwenye na nzuzo. Dị ka ihe atụ, Netflix tọhapụrụ ahịa nkiri Anyela onye ọ bụla. Ọ bụ ezie na ihe nkiri Anyela nwere ike ọ gaghị egosi mwute, ha pụrụ ikpughe banyere ndị ahịa 'ndọrọ ndọrọ ọchịchị mmasị ma ọ bụ mmasị ịkwa iko, ọmụma na ndị ahịa na-ekweta na-eme ka ọha na eze. Netflix nwara edepuchaala mata data nke na ratings-apụghị jikọrọ ọ bụla iche, ma dị izu mgbe ntọhapụ nke ndị Netflix data ọ na-ezughị ezu edepuchaala anonymized site Narayanan and Shmatikov (2008) (Lee isi nke 6). Ọzọkwa, na-ekesa data collection, na-eme nnyocha nwee ike na-anakọta data banyere ndị na-enweghị nkwenye ha. Dị ka ihe atụ, na Malawi Journals Projects, mkparịta ụka banyere a chọrọ nlezianya isiokwu (AIDS) na-transcribed na-enweghị nkwenye nke sonyere. Ọ dịghị onye n'ime ndị a usoro ziri ezi ihe bụ nsogbu ha na-agaghị emerili, ma ha ga-atụle n'isiokwu na-design-adọ nke a oru ngo. Chetakwa na unu na "ìgwè mmadụ" mee nke ndị mmadụ.